Seranan-tsambon’i Toamasina Ny 25 %-n’ny asa fanitarana no efa vita
Ny volana aprily 2018 no nametrahana ny vato fehizoro amin’ny asa fanitarana Ny seranan-tsambon’i Toamasina. ankehitriny,
10 volana aty aoriana, efa hita maso ny fiovana satria NY 25% ny asa no efa vita raha ny nambaran’ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny SPAT sy ireo teknisiana japoney avy amin’ny orinasa PENTA Ocean sy DAHIO corporation izay mifarimbona manao ny asa. Ny fanamboarana ilay velaran-tany lehibe mirefy 10 hektara azo avy amin’ny fanotorana ny ampahan-dranomasina ao amin’ny “recif Hastie” no efa an-dalam-pahavitana ankehitriny. Eo no ho atao toeram-panamboarana ireo bolongana “beton” lehibe antsoina hoe “Dolos” miisa 3.400 ary milanja 35 sy 50 taonina isan’isany izay ho ampiasaina hanalavana ny “brise lame” fiarovana ny seranana amin’ny onjan-dranomasina. Raha tsiahivina kely dia nosokajiana ho roa ny asa fanitarana ity seranana ity. Voalohany ny fanotofana ny ranomasina sy ny fanamboarana ny dolos ka any amin’ny faran’ny taona 2020 no kasaina ho vita ny asa. Mpiasa 300 mahery no efa mifarimbona manatanteraka izany ka mponina avy ao Toamasina avokoa ny ankamaroany.Tanjona amin’izao asa fanitarana izao moa ny ahafahan’i Toamasina mandray ireo sambo mpitondra entana tena vaventy indrindra eran’izao tontolo izao sy hampitomboina ny isan’ireo sambo afaka miara-miantsona eny amin’ny quai. Mahatratra 639 tapitrisa dolara moa ny fampiasam-bola kasaina hanatanterahina ity tetik’asa ity avy amin’ny alalan’ny fiaraha-miasa amin’ny Japoney. Io no fandaniam-bola lehibe indrindra natokana hoan’ny fanamboarana fotodrafitrasa izay natao teto Madagasikara taorian’ny nahazoantsika fahaleovantena.